धर्म-अध्यात्म बिनाको विकास ढाचा र बर्तमान विश्व संकट | नेपाल दर्शन
श्री गणेशाय नम: गौरीशंकरको जय:
जव धर्म अधात्मको कुरा शुरु हुन्छ तव युवाहरु पुरातन रुढीवादी वा वाइयात आदी भन्दछन र छेउ न टुप्पाको कुरा गरेर हास्न थाल्छन । म सोच्दछु यस्ता युवा जमात (पुस्ता) उत्पादन गर्ने मेकालेको शिक्षा पद्दतिलाई नै दोस दिनुपर्छ । मलाई कसैले बताइदियोस कि आधुनिक विज्ञानले कुन त्यस्तो आविष्कार गरेको वा उपकरण (यन्त्र) बनाएको छ जसले प्रकृतिलाई हानी नगरेको होस ?
विज्ञानले मानिसको जीवन सहज र सरल बनाउने नाममा धर्तिका कती रुख काट्यो ? कती जङ्गल सखाप पार्‍यो? कती करोड जिव जनावरको बासस्थान उजाड पर्‍यो? कती नदी र समुन्द्र अनी महासागरलाई ढलमा परीणत गर्‍यो? विगत १०० वर्ष यता विज्ञानको आविष्कारका कारण मानव लगायत सम्पूर्ण जिव तथा वनस्पतीहरुको जीवन कती संकटपूर्ण बनायो ?
तपाइले कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ ?
- एक मिनेट मोबाइल फोन कानमा राखेर कुरा गर्दा कती करोड कोषहरु नाश हुन्छन ?
- एउटा जेट बिमान आकाशमा १ घण्टा उडदा कती इन्धन (पेट्रोल/मट्टितेल) बाल्छ ? त्यसले कती कार्बनडाइइअसाइड उत्पादन गर्छ ?
- एक पटक रकेट उडाउदा कती किलोमिटर पर सम्म ध्वनी र वायु प्रदूषण फैलाउछ ?
- ओजन तह कती पातलिएको छ ?
- हरेक वर्ष पृथ्वीको तापक्रम कती डिग्री बढदै छ?
- प्लास्टिक जन्य प्रदूषणले पृथ्वी कती कुरुप भएको छ ?
- हामिले उपभोग गर्ने खाधान्न कती असुरक्षित छ ? कती विषाक्त बनेको छ ?
- संसारमा मानव तथा जिव वनस्पतीहरुमा कति घातक संक्रमण रोगहरु देखापर्न थालेको छ् ?
(रोचक जानकारी : संसारमा सबै भन्दा धेरै प्लस्स्टिक जन्य प्रदुशण गर्ने संस्थान कोककोला हो )
यि प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन । यस्तै अखाद्य वस्तुको बिज्ञापन हरेक मिडियामा हरेक समय किन बजिरहन्छ ?
आधुनिक बिज्ञानका कहलिएका वैज्ञानिकहरुले भनिसके पृथ्वी यही रफ्तारमा प्रदुषित हुँदै जाने हो भने अबको २००-३०० वर्ष पछी मानव लगायत कुनै पनि प्राणीको लागि यो धर्ती बसोबास योग्य हुने छैन । अर्को कुरा, पुर्विय दर्शनको वेद आदी शास्त्रहरुमा सम्पूर्ण विज्ञानका कुराहरुका सुत्रहरु हुँदाहुँदै पनि
पूर्व अर्थात भारतवर्षका नेपाल लगायत देशले किन बैज्ञानीक आविष्कार गरेनन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो । शास्त्र मै लेखिएको छ कि “यदी प्रकृतिको नाश गर्ने हो भने मात्र महायन्त्रको आविष्कार गर्नु” - मनुस्मृति ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने पूर्वीय दर्शन र यसका अनुयायी नेपाली र भारतीय सनातनीहरुको जीवनको उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ती हो न कि भौतिक शुखसयल र भोग विलास । खास भिन्नता यही हो पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शनको बिचमा । यद्दपी गणितको सम्पूर्ण ज्ञानको श्रोत वेद र उपनिषद नै हो । गणित बिना कुनै पनि कुराको आविष्कार सम्भव छैन। गणितको बिषयमा जती भारतीय ॠषिमुनी जानकार छन त्यती संसारका कोही बैज्ञानीकहरु छैनन । उदाहरणको रुपमा धर्म सम्राट श्री करपात्रजी महाराज, पुर्वाचार्य महाभाग शंकराचार्य श्री भारतीकृष्णतीर्थजी महाराज र वर्तमान पुरी मठका शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती ।उहाहरुले वैदिक शास्त्रहरूको सहाराले अनेकौ गणितका ग्रन्थहरु रचना गर्नु भएको छ। जसवाट विश्वले लाभ लिईरहेको छ।
वर्तमान समयमा आधुनिक विकासको भोग बाट दुख पाएकाहरु पूर्वीय दर्शनको खोजी गर्न थालेका छन । योग ध्यान र उत्तम सात्विक जीवनको मार्ग तिर लाग्दै छन । अर्गानिक फसल तिर रुची दिन थालेका छन । आयुर्वेद र जडिबुटी तिर विचार गर्दैछन । हात मिलाउने सट्टामा नमस्ते वा नमस्कार गर्ने र अंग्रेजी बोल्ने सट्टामा संस्कृत बोल्ने प्रयत्न गर्दैछन । अहिले भारत र नेपालमा भन्दा धेरै संस्कृत भाषा र वेदको बारेमा अध्ययन अध्यापन जर्मनी आदी युरोपका देशहरुमा हुन थालेको छ । यद्दपी ति मुलुकहरु वेद अध्ययनका लागी सक्षम र अधिकार प्राप्त होईनन ।
सेतो छाला अर्थात पस्चिमी मुलुकका व्यापारीहरु मानव स्वास्थ्य माथि खेलाबाड गरेर अर्थ आर्जन गर्ने सोच्दछन । त्यस्तै भईरहेको छ । सुरुमा मानव स्वास्थ्यलाई आघात पार्ने कुराहरु बजारमा फैलाउने (व्यापार मार्फत नै) पछी उपचारको नाममा अकुत धन आर्जन पनि गर्ने । मानव स्वास्थ्यमा समेत राजनीति र व्यापार गर्नेलाई कुन आधारमा सभ्य भन्ने ? अहिले कोरोना पनि जैविक हतियार र व्यापार सँग जोडेर विश्लेषणहरु हुन थालिसकेको छ । भविष्यले देखाउला यसको नतिजा।
यही आधुनिक र वैज्ञानीक युगमा हरेक वर्ष ४२ मिलियन ( ४ करोड २० लाख) बच्चाहरुको भुर्ण हत्या गरी मारिन्छन । ९० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु भोकमरिको कारण मर्दछन । लाखौं मानिसहरु यातयात दुर्घटना र घातक रोगका कारण मर्दछन । अहिले त यस्तो भईसकेको छ कि रोग बिहिन कुनै मानिस नै छैन। चिनको बेजिङ शहरमा १ दिन बिना माक्स रहनु भनेको १६ खिल्ली चुरोट शेवन गरे बराबरको असर गर्दछ भनेर विज्ञहरु भन्दछन । यस्तै दिल्ली इस्लामावाद्, ढाका, टोकियो, लण्डन, न्यूयोर्क लगायत शहरहरु वायु प्रदुशणमा अग्रणी छन! अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन संस्थाहरुले काठमाडौलाई पनि प्रदुषित शहर कै सुचिमा राख्छन । ध्वनी र वायु प्रदूषण रहित संसारमा कुनै शहर नै छैन एकाध अपवाद बाहेक ।
माथि उल्लेख गरे जस्तै संसार यती प्रदुषित भएको छ कि शहरी क्षेत्रमा जन्मिने बाल-बालिकाहरुमा जन्म जात कुनै न कुनै रोग लागेकै हुन्छ । यस्तै क्रम बढीरहे अबको १०-२० वर्ष पछी शहरमा जन्मने धेरै जस्तो वच्चाहरु जन्मदै अन्धो बहिरो वा लुला लंगडा लगायत कुनै न कुनै समस्या सहित जन्मने छन । अन्न तथा तरकारी बारीमा प्रयोग गरिने किटनाशक तथा विषाक्त औषधीका कारण कैयन रोगहरु सुरुवात भईसकेको छ । अहिले तथ्याङ हेर्यौ भने मिर्गौला फेल हुने हृदयघात, सुगर, ब्लड प्रेसर र विभिद प्रकारका क्यान्सरहरु सामान्य भईसकेको छ ।यसको यौटै कारण हो, अखाद्या पदार्थको सेवन र प्रदुषित वातावरण।
पहिले हिन्दू धर्म शास्त्र र सनातनी पद्दतिमा गंगा नदिमा स्नान गर्‍यो भने चर्म रोगहरु निको हुनुका साथ साथै मुक्ति प्राप्ती हुन्छ भनिथ्यो तर अहिले अवस्था उल्टिदै छ । अहिले मान्यता बाँकी छ तर नदिको सुन्दरता र स्वच्छता बाँकी छैन । गंगा नदी वारीपरी बसोवास गर्नेहरुमा नै सबैभन्दा धेरै क्यान्सर लगायत रोगहरु लाग्न शुरु भैसकेको छ ।विचार गरौ गंगा नदी कती प्रदुषित भएछ ! नेपालको वाग्मती र बिष्णुमती लगायत नदीहरु हेर्न सकिन्छ । कैयन नदीहरु सुकिसके व्यापक जंगल फडानिका कारण, त्यस्तै कैयनको अस्तित्व समाप्त भैसक्यो । त्यस्तै हजारौ सिमसार क्षेत्रहरु खण्डहर बनिसके ।
आशय के हो भने बिज्ञान त्यो हो जसमा अधात्मको पनि स्थान हुन्छ । बिकास त्यो हो जहाँ बिनाश अत्यन्त न्युन वा हुँदै हुँदैन । त्यसकारण प्रकृतिको अत्याधिक दोहन गरी गरिने कार्य कुनै दृष्‍टि बाट पनि विज्ञान वा बिकास हुन सक्दैन ।
अमेरिकामा जन्मने ४० प्रतिशत बच्चाहरु पिता बिना जन्मन्छन अर्थात विवाह बिना कुमारी स्त्रीबाट जन्मन्छन । विश्वमा सबै भन्दा धेरै पारपाचुके (सम्बध बिच्छेद) गर्ने देश पनि अमेरिका नै हो । संसारमा सबै भन्दा मानशिक रोगी ( डिप्रेशनका रोगी) र आत्महत्या गर्ने देश पनि अमेरिका हो । संसारमा धेरै क्यान्सर र सडक दुर्घटना भएर मानिस मर्ने देश पनि अमेरिका नै हो । अब भन्नुहोस हाम्रो देश अमेरिका जस्तो बनाउने कि नेपाल जस्तो बनाउने ?
जय गोरखनाथ :
जय पशुपतिनाथ :